SOS - Burmese
Voter registration application for Michigan - Burmese version (PDF)
Absent voter ballot application for Michigan - Burmese version (PDF)
Can I Register to Vote Toolkit - Burmese version (WORD DOC)
> Jump to Registration Requirements
> Jump to Voting from home (အိမ်မှ မဲပေးခြင်း)
> Jump to Voting on Election Day (ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးခြင်း)
> Jump to FAQ (အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)
Can I register to vote? ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသလား
သင်သည် မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့တစ်မြို့(သို့မဟုတ်) မြို့နယ်တစ်ခုခုတွင် အနည်းဆုံး ရက် ၃၀ နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း ၃၀ နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
သင့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် အသက် ၁၇ နှစ် ခွဲ (သို့) ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သင်သည် လက်ရှိတွင် ထောင်ဒဏ်(သို့)အကျဉ်းချထားခံရသူမဖြစ်ရပါ။
What address do I use to register to vote?
သင့်အနေဖြင့် အဓိကနေထိုင်ရာနေရာ၏ လိပ်စာကိုအသုံးပြုပါ။ အဓိကနေထိုင်ရာနေရာ ဆိုသည်မှာ ညစဉ်လိုလို အိပ်စက်သည့်နေရာ ဖြစ်ပြီး သင်ပိုင်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းထားရှိရာနေရာကို ဆိုလိုပါသည်။
What if I’mastudent? ကျောင်းတက်ရောက်နေသူဖြစ်ပါက..
မီချီဂန်ပြည်နယ်မှဖြစ်ပြီး မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်တက်ရောက်နေသည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မဲပေးရန်အတွက် မိမိ၏ကျောင်းလိပ်စာ(သို့) မိမိ၏အိမ်လိပ်စာနှင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ မီချီဂန်ပြည်နယ်မှ ပြည်နယ်ပြင်ပရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့သွားရောက်၍ တက်ရောက်သောကျောင်းသားများအနေဖြင့် မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော မိမိ၏အိမ်လိပ်စာဖြင့်ပင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ မီချီဂန်ပြည်နယ်မှမဟုတ်သော်လည်း မီချီဂန် ပြည်နယ်တွင်းရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့လာရောက်၍ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မဲပေးခွင့်အတွက် မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိ မိမိတက်ရောက်နေသောကျောင်းလိပ်စာဖြင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားပြည်နယ်များအတွက် မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်သိရှိလိုသည်များကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရှိ မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် မီချီဂန်ပြည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီး မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင်မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ပါက သင်၏မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသော လိပ်စာနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(သို့) ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသော လိပ်စာတို့ တူညီရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ခုခုတွင် လိပ်စာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပါက အခြားတစ်ခုတွင်လည်း လိပ်စာအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးက သင်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) မှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားပေါ်တွင် ကပ်ရန်အတွက် သင်၏လိပ်စာအသစ်ပါရှိသော Sticker တစ်ခုကိုသင့်ဆီသို့ စာတိုက်မှတဆင့်ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အခါ သင့်လိပ်စာကို www.migov/VoterRegistration ရှိ Michigan’s Online Voter Registration System မှတဆင့် ဝင်ရောက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
What if I’m in jail or was convicted ofacrime? ထောင်ကျနေသူ(သို့မဟုတ်) ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားသူဖြစ်ပါက..
သင့်အနေဖြင့် ထောင်(သို့မဟုတ်)အကျဉ်းစခန်းတစ်ခုခုတွင် အပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့်အချိန်တွင် မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါအခြေအနေတစ်ခုခုနှင့်အကျုံးဝင်ပါက မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော်လည်း ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းမရှိလျှင်
ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသော်လည်း အကျဉ်းစခန်း(သို့)ထောင် အတွင်း၌ မဟုတ်လျှင်
What if I am homeless? အိမ်ခြေမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက..
သင့်အနေဖြင့် အိမ်မရှိပါက သင်နေထိုင်ရာ လမ်းထောင့်၊ ပန်းခြံ၊ အမိုးအကာရှိသည့်ယာယီနေထိုင်ရာနေရာ(Shelter) သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းလိုလို နေထိုင်လေ့ရှိသည့် နေရာတစ်ခုခုကို လိပ်စာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ နေရာကိုဖော်ပြရာတွင် လမ်းသွယ်နှစ်ခုဆုံရာနေရာကို ရေးသားဖော်ပြနိုင်ပါ သည်။ သင့်ဆီသို့ စာပို့ရန်လိပ်စာရှိလျှင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း မဖြစ်မနေမလိုအပ်ပါ။ စာပို့ရန်လိပ်စာဆိုသည်မှာ သင်နေထိုင်ရာ Shelter ရှိသည့် နေရာ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နယ်လှည့်ထောက်ပံ့ကူညီရေးစခန်း၊ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်စား စာလက်ခံမည့်သူတစ်ဦးဦး၏ လိပ်စာကို ဆိုလိုပါသည်။
VOTER REGISTRATION (မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း)
You can register to vote at any time! မဲပေးခွင့်အတွက် အချိန်မရွေး မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်
သင့်အနေဖြင့် မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင် မဲပေးခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့မှတ်ပုံတင်ရာ၌ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ည (၈) နာရီအထိ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း တတ်နိုင်လျှင် စောစီးစွာမှတ်ပုံတင်ခြင်ပြုလုပ်ပါက သင့်အတွက်ပို၍ကောင်းပါသည်။ စောစီးစွာမှတ်ပုံတင်မည်ဆိုပါက သင့်အနေဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ကို ပိုမို၍ရွေးချယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Am I registered to vote? မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးကြောင်း သေချာစေရန်
သင်၏မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန် မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/vote တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းသည် သင်လက်ရှိနေထိုင်ရာဒေသတွင် မဲပေးခွင့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် သေချာစေရန် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။
What is “proof of residency”? “နေထိုင်ကြောင်းသက်သေ” (Proof Of Residency) ဆိုတာဘာလဲ
“နေထိုင်ကြောင်းသက်သေ”(Proof Of Residency) ဆိုသည်မှာ သင့်နာမည်နှင့် လက်ရှိတွင် သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်၏ လိပ်စာပါဝင်သော စာရွက်စာတမ်း (Document)တစ်ခုခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ အောက်ပါစာရင်းတွင်ပါဝင်သော အရာများထဲမှ (စာရွက်စာတမ်း(သို့) အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်) တစ်ခုခုကို ဆိုလိုပါသည်။
မီချီဂန်ပြည်နယ်မှထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(သို့) မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား
Where is my city or township clerk’s office, and when is it open? ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ရုံးသည် မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီး၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါသလဲ?
မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/vote သို့ဝင်ရောက်၍ My Clerk Tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင်နေထိုင်ရာမြို့(သို့)မြို့နယ်၏ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်အတွက် သင်နေထိုင်ရာလိပ်စာကိုထည့်သွင်းပါ။ သို့မဟုတ် မြို့(သို့)မြို့နယ်၏ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးရုံးခန်းသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ သက်ဆိုင်ရာမြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးရုံးများကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရုံးပိတ်ရက်(Weekend) တွင် ပုံမှန်ရုံးချိန်အတိုင်း အနည်းဆုံး ၈ နာရီဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Do I needaphoto ID or proof of citizenship to register to vote? ဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း(သို့) ဓါတ်ပုံအထောက်အထားလိုအပ်ပါသလား
မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ မဲဆန္ဒပေးရန် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းမည်ဆိုပါက ဓါတ်ပုံပါသည့်အထောက်အထားကိုတောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ထိုအထောက်ထားမရှိပါက၊ သို့မဟုတ် မပါလာပါက ပုံစံစာရွက်(Simple Form)တစ်ခုတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ သင်သည် စာတိုက်မှတဆင့် ဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းမည် ဆိုပါက သင့်တွင်မီချီဂန်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကဒ် သို့မဟုတ် လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်များရှိလျှင် ယင်းနံပါတ်များကို သင်မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာရှိ သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
Voting From Home (အိမ်မှ မဲပေးခြင်း)
You can vote before Election Day! ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မဲပေးနိုင်
မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိ မှတ်ပုံတင်ထားသောမဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် အခုလက်ရှိအချိန်တွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ(Absentee Ballot) ဟုခေါ်ဆိုသည့် မဲပေးခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် မဲပေးနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းအတွက် မည်သည့်ဆင်ခြေ၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှ ရှိစရာမလိုပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အိမ်မှမဲပေးခြင်းဖြစ်စေ၊ သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့) မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
How do I vote FROM HOME before Election Day? ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင် အိမ်ကနေ ဘယ်လိုမဲပေးရမလဲ?
အဆင့် (၁) - မဲဆန္ဒလွှာကို တောင်းဆိုပါ။ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်အတွက် လျှောက်လွှာကိုဖြည့်သွင်း၍ သင့်တရားဝင်လက်မှတ်ကို ၎င်း လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ရေးထိုးဖြည့်သွင်းပြီး သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့) မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးထံသို့ ပေးပို့တင်သွင်းပါ။ အချက်အလက်များပြီးပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းထားသော လျှောက်လွှာပုံစံကို Email မှသော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှသော်လည်းကောင်း၊ ဖက်စ်(Fax) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အဆင့် (၂) - မဲဆန္ဒလွှာကို ဖြည့်သွင်းပါ။ စာတိုက်သို့ သင့်အတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာရောက်လာချိန်ကို စောင့်မျှော်ပါ။ မဲဆန္ဒလွှာရောက်လာလာချင်း ၎င်းကို ဖြည့်သွင်း၍ ပေးထားသောစာအိတ်တွင် ထည့်သွင်းကာ စာအိတ်ပေါ်တွင် သင်၏ တရားဝင်လက်မှတ်ကို ရေးထိုးပါ။
အဆင့်(၃) - သင်၏ ဆန္ဒမဲကို တတ်နိုင်မျှအမြန်ဆုံးပေးပို့ပါ။ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းထားသော သင်၏ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့၊ ည (၈) နာရီမတိုင်ခင် သင်နေထိုင်ရာမြို့(သို့) မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးထံသို့ ရောက်ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာတိုက်မှပေးပို့ခြင်းသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်နိုင်သောကြောင့် စာတိုက်သို့ စောလျင်စွာသွားရောက်ပို့ဆောင်သင့်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင် တစ်ပတ်အလို(၂၀၂၀ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိအချိန်) အတွင်း သင်၏မဲဆန္ဒလွှာကို ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးခန်းသို့ အရောက်ပေးပို့နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
Where can I get an application for an absentee ballot? ကြိုတင်ဆန္ဒမဲအတွက် လျှောက်လွှာကို မည်သည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသလဲ?
မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင် မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်ထားသူတိုင်းဆီသို့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်လျှောက်ထားလွှာကို စာတိုက်မှတဆင့်ပေးပို့ပါသည်။ လျှောက်လွှာသည် နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးလွှာကို လက်ခံရရှိစေရန်အတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် လျှောက်လွှာကို လက်ခံမရရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ရှာဖွေမတွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/vote တွင် ဒေါင်းလုတ်(Download) ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးဆီသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်လျှောက်ထားလွှာကို စာတိုက်မှပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
What is the deadline to vote FROM HOME before Election Day? ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ မိမိအိမ်ကနေ ကြိုတင်မဲပေးရန် နောက်ဆုံးရက်က ဘယ်ရက်လဲ?
သင်၏ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းထားသော ကြိုတင်မဲဆန္ဒလွှာကို ရွေးကောက်ပွဲနေ့၊ ည (၈) နာရီမတိုင်မီ မြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးက လက်ခံရရှိရပါမည်။
သင်၏ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်အတွက် လျှောက်ထားလွှာကို စာတိုက်မှပေးပို့လျှောက်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို တတ်နိုင်သမျှ စောစီးစွာစတင်ဆောင်ရွက်ပါ။
နိုဝင်ဘာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် သင်၏မဲပေးခွင့်လျှောက်ထားလွှာကို အခုတင်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
How do I vote IN PERSON before Election Day? ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ လူကိုယ်တိုင် မည်သို့ ကြိုတင်မဲပေးရမလဲ?
အဆင့် (၁) - သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး ရုံးသို့ သွားပါ။
အဆင့် (၂) - ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို ဖြည့်သွင်းပြီး၊ ၎င်းကို တာဝန်ကျဝန်ထမ်းထံ အပ်နှံပါ။
အဆင့် (၃) - သင်၏မဲဆန္ဒလွှာကို ဖြည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက်ပေးထားသည့်စာအိတ်အတွင်းထည့်သွင်းပါ။ စာအိတ်ပေါ်တွင် သင်၏တရားဝင်လက်မှတ်ကိုရေးထိုးပါ။ ထို့နောက် ၎င်း စာအိတ်ကို တာဝန်ကျဝန်ထမ်းထံတွင် ပေးထားခဲ့ပါ။
When can I vote IN PERSON before Election Day? ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ လူကိုယ်တိုင် ဘယ်အချိန်တွင် ကြိုတင်မဲပေးရမလဲ?
နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး မဲပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် သင်နေထိုင်ရာနေရာ၌ မဲပေးခွင့်အတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီးသူဖြစ်ပါက၊ နိုဝင်ဘာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ရုံးခန်းသို့သွားရောက်၍ မဲပေးရန် နောက်ဆုံးရက်/အချိန် မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်(တနင်္လာနေ့)၊ ညနေ (၄) နာရီ အထိဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် နေထိုင်ရာနေရာတွင် မဲပေးခွင့်အတွက် မှတ်ပုံမတင်ရသေးပါက မြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးခန်းတွင် သွားရောက်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မဲပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆုံးရက်/အချိန်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့၊ ညနေ (၈) နာရီဖြစ်ပါသည်။
Where is my city or township clerk’s office and when is it open? ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ရုံးသည် မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီး၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါသလဲ?
Voting On Election Day (ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးခြင်း)
When are the polls open? ဘယ်အချိန်မှာ မဲရုံဖွင့်လှစ်ပါသလဲ?
မဲရုံများကို ဒေသစံတော်ချိန် မနက် (၇) နာရီ မှ ည (၈) နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် မဲရုံသို့ ည (၈) နာရီအတိရောက်ပါက မဲပေးခွင့်ရှိပါသည်။
What will be on the ballot? မဲဆန္ဒလွှာပေါ်မှာ ဘာတွေရှိလဲ?
မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/vote တွင် မဲဆန္ဒလွှာနမူနာပုံစံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Where do I vote on Election Day? ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မည်သည့်နေရာမှာ မဲပေးရမှာလဲ?
သင့်အနေဖြင့် လက်ရှိနေထိုင်ရာနေရာတွင် မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးပါက သင်သွားရောက်မဲပေးနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် မဲရုံတွင် မဲပေးရမည်။ သင့်အနေဖြင့် လက်ရှိနေထိုင်ရာနေရာတွင် မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံမတင်ရသေးပါက သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးခန်းသို့ ည (၈) နာရီမတိုင်ခင် သွားရောက်၍ နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထားကိုပြသကာ မဲပေးခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးရုံးခန်းတွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲအဖြစ် တခါတည်း မဲပေးနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) အချိန်ရပါက သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံသို့သွားရောက်၍လည်း မဲပေးနိုင်ပါသည်။
How do I find my polling place? ကျွန်ုပ် မဲပေးရမည့် မဲရုံကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ?
Online မှ တဆင့်၊ မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/vote တွင် ကြည့်ရှုရန်
သင်၏ မဲဆန္ဒရှင်အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြား(Voter Identification Card) ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုရန်
သင်နေထိုင်ရာမြို့(သို့)မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေးထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမေးမြန်းရန်
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(Election Protection) ၏ (ဤလမ်းညွန်ချက် အဆုံးတွင်ဖော်ပြထားသော)
What if I’ve moved? နေရာအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့လျှင်..
သင့်အနေဖြင့် နေရာအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်တိုင်း သင်၏ မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းကို Update လုပ်(ပြန်လည်ပြင်ဆင်) သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင် Update မပြုလုပ်ပါက ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရောက်သည့်အခါ ည ၈ နာရီ မတိုင်ခင် သင်နေထိုင်ရာ မြို့(သို့)မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးခန်းသို့ နေထိုင်မှုအထောက်အထားကို ယူဆောင်ကာသွားရောက်ပြီး မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် မူလ မဲရုံတွင် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အဖြစ်မဲပေးခွင့်ရနိုင်သည့် အချက်များမှာ..
သင်အနေဖြင့် လက်ရှိနေထိုင်သောမြို့အတွင်း(သို့) မြို့နယ်အတွင်းမှာပင် နေရာအပြောင်းအရွေ့လုပ်ပါက
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အခြားမြို့(သို့) မြို့နယ်သို့ အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါက
(၎င်း ရက်ပေါင်း ၆၀ ဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချိန်အထိ ကြားကာလဖြစ်သည်)
Can I get time off from work to vote? မဲပေးရန် အလုပ်မှ ခဏထွက်လာလို့ရနိုင်မလား?
သင့်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် သင့်ကို မဲသွားပေးခွင့်အား လုပ်ခမဖြတ်ဘဲဖြစ်စေ၊ ဖြတ်၍ဖြစ်စေ ခွင့်ပေးဖို့ တာဝန်မရှိပါ။ ထိုအလုပ်တွင် ယင်းသို့မဲသွားပေးရန် ခွင့်ပေးသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ရှိ၊မရှိကို မေးမြန်းစုံစမ်းထားပါ။ ခွင့်မရနိုင်ပါက ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မတိုင်ခင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးထားပါ။
Voting and ID (မဲပေးခြင်းနှင့် ID)
Do I needaphoto ID to vote? မဲပေးရန်အတွက် အသိအမှတ်ပြုဓါတ်ပုံ(Photo ID)လိုအပ်ပါသလား?
မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် သင့်မှာရှိပါက မဲရုံသို့သွားရောက်သည့်အခါ သင်နှင့်အတူယူဆောင်သွားပြီး မဲရုံဝန်ထမ်းများကို ပေးပါ။ မဲသွားပေးသည့်အခါ မဲရုံဝန်ထမ်းများက သင့်ကို Photo ID တောင်းပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင်မရှိပါက(သို့)သင်နှင့်အတူပါမလာပါက မဲပေးရန်အတွက် ပုံစံစာရွက်(Simple Form) တစ်ခုတွင်လက်မှတ်ထိုးပြီး မဲပေးနိုင်ပါသည်။
Do I needaphoto ID to vote if this is my first time voting in Michigan? မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခြင်းဖြစ်ပါက အသိအမှတ်ပြုဓါတ်ပုံ(Photo ID) လိုအပ်ပါသလား?
မလိုအပ်ပါ။ စာတိုက်မှတဆင့် (သို့) မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် လှုံ့ဆော်ကူညီရေးအဖွဲ့(Voter Registeration Drive) ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပထမဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်အနည်းအကျဉ်းတို့အနေဖြင့်သာ မဲပေးရန်အတွက် အချို့သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အရာများထဲမှ တစ်ခုခု(အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်(သို့) စာရွက်) ဖြစ်လျှင်ရပါသည်။
သင့်ဓါတ်ပုံနှင့် နာမည်ပါရှိသော ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတစ်ခုခု(၎င်းတွင် လိပ်စာပါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မပါရှိသည်ဖြစ်စေ)
မည်သည့်ပြည်နယ်မှ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား(သို့မဟုတ်) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကတ်ပြား
အထက်တန်းကျောင်း(သို့) ကောလိပ် ကျောင်းသားကတ်
စစ်တပ်(သို့မဟုတ်) အစိုးရဌာနတစ်ခုခုမှထုတ်ပေးသော အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြား
သင့်ဓါတ်ပုံမပါရှိဘဲ နာမည်နှင့်လိပ်စာတို့သာဖော်ပြထားသည့် အထောက်အထားတစ်ခုခု
လတ်တလောပေးဆောင်ထားသည့် မီးခ၊ ရေခ၊ ဓါတ်အားခပြေစာ
အခြားမည့်သည့် အစိုးရမှထုတ်ပေးသော စာရွက်စာတမ်းမဆို
Where is my absentee ballot? ကျွန်ုပ်ရဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲက ဘယ်မှာလဲ?
သင့်အနေဖြင့် သင်၏ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံကို မီချီဂန်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေးစင်တာ ဖြစ်သည့် www.mi.gov/Vote တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကယ်၍သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များ သေချာစေရန် အဆိုပါ Webiste သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ လျှောက်ထားလွှာကို နေထိုင်ရာမြို့(သို့) မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုတမ်းစာရေးက လက်ခံဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ
သင့်အတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာ ကို သင့်ထံ စာတိုက်မှ ပို့ဆောင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ
သင်ပေးပို့လိုက်သော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲကို သင်နေထိုင်ရာမြို့(သို့) မြို့နယ်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲအမှုတမ်းစာရေးက လက်ခံရရှိခြင်း၊ ရှိမရှိ
Frequently Asked Questions (အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)
What should I do if I requested an absentee ballot but never received it? ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးလွှာရရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့သော် လည်း လက်ခံရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါက ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
သင်နေထိုင်ရာ မြို့ (သို့) မြို့နယ်တွင်ရှိသော ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးသို့ တတ်နိုင်သလောက်စောလျှင်စွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ပထမ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲတောင်းဆိုခဲ့မှုကို ပယ်ဖျက်ပြီး၊ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံတောင်းဆိုပါ။ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံသို့သွားရောက်ပြီး ပုံစံစာရွက်(Simple Form) တွင် ဖြည့်သွင်းပြီး မဲပေးနိုင်ပါသည်။
What if I received my absentee ballot but then made an error on it or it was lost or destroyed? ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီအပေါ်မှာ အမှားအယွင်းတစ်ခုလုပ်မိလျှင် (သို့မဟုတ်) ၎င်းက ပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးသွားလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
သင်နေထိုင်ရာ မြို့ (သို့) မြို့နယ်တွင်ရှိသော ရွေးကောက်ပွဲအမှုထမ်းစာရေး၏ ရုံးသို့ တတ်နိုင်သလောက်စောလျှင်စွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ပထမ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲတောင်းဆိုခဲ့မှုကို ပယ်ဖျက်ပြီး၊ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံတောင်းဆိုပါ။ သင့်ဆီမှာ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာရှိနေပြီး ၎င်းကိုသင်က အမှားအယွင်းတစ်ခုခုပြုလုပ်မိခဲ့လျှင်(သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ပျက်စီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်လျှင် ၎င်းကို သင်နှင့်အတူယူလာခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံသို့သွားရောက်၍ ဖောင်ဖြည့်ပြီး မဲပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ဆီမှာ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလွှာရှိနေပြီး ၎င်းကိုသင်က အမှားအယွင်းတစ်ခုခုပြုလုပ်မိခဲ့လျှင်(သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ပျက်စီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်လျှင် ၎င်းကို သင်နှင့်အတူယူလာခဲ့ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကာကွယ်ကူညီရေးအဖွဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အကူအညီရယူရန်, 866-OUR-VOTE (866-687-8683) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
Para recibir ayuda en español, llamaa888-VE-Y-VOTA (888-839-8682);
؛ (844-925-5287) یة، اتصل على: (ô اللغة العر ô¼ للمساعدة )
To join the language access task force or for more information on our initiatives
please contact Bilal Hammoud Email: HammoudB@Michigan.gov Cell: 517-331-3729